Budata ma wụnye gam akporo M Launcher 2 | Androidsis
Taa, aga m akọwara gị ụzọ ziri ezi iji nwee ọ enjoyụ tupu onye ọ bụla ọzọ Gam akporo M igba egbe Mmepụta preview version 2, nke ahụ bụ Google Ugbu a Launcher na ya mbipute maka gam akporo M nke ahụ na-abịa na ndọtị na-atọ ụtọ dị ka ohere nke ịmegharị ntụgharị ihuenyo na ekwentị.
Faịlụ ndị a dị mkpa iji nwee ike ịnụ ụtọ ya Android M Launcher ọ bụla gam akporo 4.1 ma ọ bụ elu version, wepụtara ozugbo na mbipute Mmepụta Onye Mmepụta nke Google wepụtara n'oge na-adịbeghị anya. Naanị ihe anyị ga-eme ebe a Gam akporosis, bụ iji nye gị njikọ nbudata nke ngwa ndị dị mkpa maka nrụnye ziri ezi yana ịkọwa ụzọ ziri ezi iji wụnye ya.
Tupu ịmalite m ga-adọ gị aka ná ntị na nke a nwere ike nkuzi iji wụnye Android M Launcher Mmetụta na niile gam akporo ọnụ ụdị, n'ihi na ihe atụ, M jisiri iji wụnye ya ọma na LG G2 na gam akporo AOSP 5.1.1, ọ bụ ezie na ọ gaghị ekwe m omume ịme ya na LG G3 Android 5.02 Stock ma ọ bụ na Mi4 na Miui V6. Ọ bụ n'ihi nke a ka m ga-ajụ unu niile ndị malitere ịnwale ma ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ na ngwaọrụ gam akporo gị, biko mee ka anyị mara site na nkọwa nke otu post ahụ, ụdị ngwanrọ nke gam akporo yana ụdị nke ị nwere jisiri ike wụnye ya ma ọ bụ.
Kedu otu m ga esi esi wunye ihe ntanye gam akporo M2 na ntupu gam akporo m?
Na aka ekpe gam akporo M Launcher na n'aka nri ụdị ọhụrụ nke gam akporo M2
para wụnye Android M Launcher Mmepụta preview 2, ma ọ bụ na ọ dịghị ihe ọzọ na-agbalị iji wụnye ya, mbụ anyị ga- budata faịlụ a abịakọrọ na usoro ZIP O nwere ihe niile dị mkpa maka nhazi ya. N'ime ị ga-ahụ ngwa abụọ na folda nwere ọba akwụkwọ dị mkpa maka onye ọ bụla nwere nsogbu na nrụnye ma nwee ọdụ nwere mgbọrọgwụ, gbalịa idozi ya site na iyingomi na ịgafe folda ARM niile n'ụzọ usoro / lib.
Faịlị ndị ọzọ ndị ọzọ, ọrụ Google na ngwa Google, ịdị n'ụdị APK, anyị ga-etinye ha naanị site na ịpị ha, ebe mbụ nyere ikike ikike iji wụnye ma ọ bụ melite ngwa site na mpụga, ya bụ, nhọrọ iji nwee ike ka wụnye ngwa site na isi mmalite.
Kedu ka m ga-esi gwa gị, na ụkpụrụ m ga-anwale ndị dị mfe echichi nke abụọ ngwa, ma ọ bụrụ na e gosipụtara anyị ụdị nsogbu na ngwa Google ma ọ bụ na Google Ugbu a Launcher, mgbe ahụ ọ ga - edetu ọba akwụkwọ ARM na ụzọ ahụ anyị kwuru usoro / lib.
Ogwe mmịfe ọhụrụ ka ịgbanwee ọsọ ọsọ n'etiti Wijetị
Site na nke a dị mfe, ọ ga-ezuru iji nwee ike ịnụ ụtọ n'ihu onye ọ bụla ọhụụ ọhụrụ nke gam akporo M onye nrụpụta Preview 2 yana ọrụ ya ọhụụ dịka vetikal na uncategorized ngwa drawer ma ọ bụ ihe ndị a kpọtụrụ aha na mbụ nke ntụgharị ihuenyo na smartphones, otu nhọrọ nke dịbu naanị maka Android Tablets.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Gam akporo Root » [Mgbọrọgwụ] [APK] Download na wụnye ihe nkwụnye ọhụrụ maka gam akporo M onye nrụpụta Preview 2 tupu onye ọ bụla ọzọ
Ọ naghị arụ ọrụ na Nexus 6 na-enweghị mgbọrọgwụ.
Daniel onyegbula dijo
Ọ naghị arụ ọrụ na Moto X 2013, ọ na-enye google search error. M depụtaghachiri ọba akwụkwọ ma wụnye ngwa ọ naghị arụ ọrụ
Zaghachi Daniel Cervera
na nexus 5 na-enweghị mgbọrọgwụ (echere m) igbe ntinye awụnyere nke ọma. mana ọ na-agwa m na ọ na-akwụsị oge ọbụla. ọ dịghị mkpa itinye folda ahụ.
M nwere gbanyere mkpọrọgwụ Galaxy S4 na ọ naghị arụ ọrụ ma! ruo mgbe itinye folda ahụ na ihe ọ bụla
Zaghachi Freddy Osorio
Facebook na - agbakwunye nhọrọ ọhụrụ iji chịkwaa ihe a na - ahụ na ntanetịime akụkọ gị